Maxay Galmudug ka tiri magacaabista golaha wasiirada cusub? - Caasimada Online
Home Warar Maxay Galmudug ka tiri magacaabista golaha wasiirada cusub?
Maxay Galmudug ka tiri magacaabista golaha wasiirada cusub?
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka Galmudug ayaa goordhow ka hadlay magacaabida Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia, kadib markii Ra’isul wasaaraha Xukuumada uu sheegay in Xubnaha Golaha uu kusoo xushay kalsooni.
Maamulka ayaa sheegay in Xubnaha Golaha Wasiirada ay noqon doonaan kuwa buuxiya kalsoonida lagu soo xulay waxa uuna maamulka tilmaamay inay dhowrayaan hanaanka ay ku shaqeyn doonaan Wasiirada la magacaabay.